Mashoko aVaMnangagwa Otambirwa Zvakasiyana muZimbabwe
Gunyana 27, 2018
VaEmmerson Mnangagwa vari kuUnited Nations General Assembly
Vanhu vari kuita maonero akasiyana siyana pamusoro pemashoko emutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, ayo vakataura kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York, vamwe vachiti mashoko avo akanaka chose, asi vamwewo vachiti VaMnangagwa havafaniri kungotaura chete asi kuti vanofanira kuita sekutaura kwavo.
Vachitaura pamusangano wekuzeya mashoko aVaMnangagwa ekutanga kuUNGA, vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano revapeteti venhau reZimbabwe National Editors Forum, VaNjabulo Ncube, vati hapana chitsva chakataurwa naVaMnangagwa uye munhuwo zvake aida kufadza vamwe vake pamwe nekuzvichenura pamberi pevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika.
Mutori wenhau, Jeffrey Moyo, uyo anonyorera bepanhau rekuAmerica reNewYork Times, ati haana kufara nemashoko aVaMnangagwa achiti havana kutaura chokwadi pane zviri kutika munyika.
Asi mumwe mutapi wenhau anoshandira company ye263 Chat Costa Nkomo, atiwo pane zvimwe zvakanaka zvakataurwa nemutungamiriri wenyika zvakanaka zvakaita sekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende zvibviswe.
VaFarai Mabeza vanoshanda vakazvimirira vatiwo yasvika nguva yekuti vanhu vasangopikisa zvinenge zvataurwa nemutungamiriri wenyika asi kuti vaoone zvakanaka nezvakashata.
Vatiwo zviri pachena kuti pane zvimwe zvakanakirawo nyika pamashoko akaurwa nemutungamiriri wenyika.
Mumwe mutapi wenhau apindawo mumusangano uyu, Thomas Madhuku, atiwo VaMnangagwa vanofanira kupihwa mukana wekuita zvavakataura kuUNGA.
Mumashoko avo nezuro manheru VaMnangagwa vakataura zvakawanda vachibata nyaya yekuti zvirango zvinofanira kubviswa, uye kuti hurumende yavo inoda kuti vakunze vauye kuzosima mari munyika, kuti vanhu vagare murunyararo nezvimwe asi vamwe vapinda musangano uyu vati VaMnangagwa vanofanira kuita zvavaitaura kuUninted Nations.
VaMasimba Manyanya vatiwo nyaya yekuti Zimbabwe Is Open for Business inyaya yakanaka chose uye veruzhinji vamirira kuona kuti hurumende ichaita zvairi kutaura here.
Vati chinosuwisa ndechekuti pane zvese zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika, zvizhinji zvacho hazvisi kutevedzwa nehurumende uye chingave chinhu chakanaka kana izvi zvikaitwa.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development, VaClaris Madhuku, vati VaMnangagwa vaifanira kunge vakataura zvavanokwanisa kuita kwete kuda kuratidza nyika kuti vakasiyana nevaimbove mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe.
Izvi zvatsinhirwawo naVaTjenesani Ntungakwa avo vati vaitarisira kuti VaMnangagwa vature zvavari kuita kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kwete kuda kufadza vekunze asi vanhu vachitambura munyika.
Zvichakadaro, nyanzvi mune zve matongerwo enyika uye vachidzidzisa pa Tswaane University of Technology kuSouth Africa, Doctor Ricky Mukonza, vanoti havasi kunyanya kufara nezvakataurwa naVaMnangagwa kumusangano weUnited Nations General Assembly nekuti zvakangofanana nezvaigara zvichitaurwa nevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
Muzvinabhizinesi uye vakarerekera kubato reZanu-PF, VaNkosana Mpofu, vanoti mashoko aVaMnangagwa anofadza uye haana zvekutuka, kana hasha dzaigara dzichitaurwa panguva yakadai naVaMugabe.
Hurukuro naVaDoctor Mukonza naVaSkosana Mpofu